Posted by သဒ္ဒါ0comments
ကိုယ့်ရှေ့မှာ ကြုံတွေ့လိုက်ရတဲ့ ချစ်သူ စုံတွဲအကြောင်းလေး ပြောပါရစေဦး။ မိုးတွင်းကာလက အဖြစ်အပျက် တစ်ခုပါ။ ကျွန်တော် အလုပ်ပြန်ချိန် မိုးကလဲ သဲသဲမဲမဲ ရွာသွန်းနေတယ်။ တစ်ယောက်တည်း စဉ်းစားခန်းဝင်ရင်း လျှောက်လာချိန်မှာပေါ့။ အမှတ်တမဲ့ သမီးရည်းစားနှစ်ယောက်ရဲ့ စကားသံကြောင့် ကျွန်တော့် အတွေးတွေ ပျောက်ကွယ်သွားပြီး အာရုံက သူတို့နှစ်ယောက် ပြောဆိုနေတာတွေအပေါ် ရောက်ခဲ့ရ ပါတယ်။
ကောင်လေး - အချစ်ရယ် ဒီလိုမိုးအေးအေးလေးနဲ့ မင်းကို မလွတ်တမ်းဖက်ထားချင်လိုက်တာ။ ကိုကိုမင်းကို မခွဲချင်တော့ဘူး။ ဘာကိုပဲ ရင်ဆိုင်ရ ရင်ဆိုင်ရ အဆင်သင့်ပါပဲ အချစ်ရယ်!
ကောင်မလေး - အတူတူပါပဲ ကိုကိုရယ်။ ချစ်က ကိုကိုထက်ပိုပြီးတော့တောင် မခွဲချင်ပါဘူး။ ချစ်ကလေ ကိုကိုရင်ခွင်ထဲမှာပဲ အမြဲနေချင်တာပါ။ ဒီလိုမိုးအေးအေးလေးနဲ့ ကိုကိုရင်ခွင် နွေးနွေးလေးနဲ့ ချစ်တော့ ဘာနဲ့မှ မလဲနိုင်တော့ဘူး ကိုကို !
ကောင်လေး - အချစ်ရယ် မင်းအနားမှာရှိရင် ဘာမှမလိုချင်ပါဘူး။ မင်းဟာကိုယ့်ဘ၀ရဲ့ အားတစ်ခုပဲ။ မင်းမရှိရင် ငါလဲ မရှင်သန်နိုင်ဘူး။ အဲဒီလောက်ထိမင်းကို ချစ်တယ်။ ကိုကို ကို ခွဲမသွားပါနဲ့ အချစ်ရယ် နော် . . .
ကောင်မလေး - ကိုကိုရယ် ကိုကိုနဲ့သာဆို ချစ် ဘယ်လိုဘ၀မျိုးမှာ ဖြစ်ဖြစ်နေပျော်ပါတယ်။ ဆင်းရဲချင် ဆင်းရဲပါစေ။ ဘယ်လိုအခက်အခဲ ၊ အနှောက်အယှက်၊ အတားအဆီးကိုမဆို နှစ်ယောက်လက်တွဲမဖြုတ်ဘဲ ရင်ဆိုင်ကြမယ်နော် ကိုကို သိလာ . . . ?
သူတို့နှစ်ယောက် ချစ်နလံ ထနေတာကို ကြားနေမြင်နေရပြီး အားကျမိသူက ကျွန်တော်ရယ်ပါ။ မိုးကလဲ သဲကြီး မဲကြီးရွာနေရာကနေ စဲစပြုလာပါပြီ။ မိုးရဲ့ သက်ရောက်မှုတွေက လမ်းပေါ်မှာ ရွံ့ဗွက် ၊ ချိုင့်ခွက် တွေနဲ့ မဲမှောင် နေတဲ့ မိုးကောင်းကင် အောက်မှာဆိုတော့ လမ်းပေါ်မှာလည်း အရာအားလုံးဟာ ၀ိုးတိုးဝါးတား ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ တခဏအကြာမှာတော့ တလောကလုံးကို နှစ်ယောက်တည်းထင်လို့ မိုးမမြင် လေမမြင် ချစ်နလန် ထနေ ကြတဲ့ ချစ်သူ နှစ်ယောက်ထဲက ကောင်မလေး ပုခုံးကို ဖက်ထားတဲ့ ကောင်လေးဟာ စမန်ထနေတာနဲ့ပဲ အောက်က ရွံ့ဗွက်ကို မမြင်တော့ဘဲ နင်းချလိုက်ပါလေရော။ အမှတ်တမဲ့ ဟန်ချက်ပျက်ပြီး ဖင်ထိုင်ကျသွားတဲ့ ကောင်လေးဟာ ယောင်ယမ်းပြီး အားကိုးရာ အားကိုးကြောင်း ချစ်သူကောင်မလေးရဲ့ လက်ကို ဖမ်းစွဲလိုက်မိသ လိုဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာတော့ -
ဟဲ့ . . . မသာရဲ့ အောက်ကိုလဲ နည်းနည်းပါးပါးကြည့်လေ။ ဒါလေးတောင်မမြင်ရအောင် ကန်းနေလို့ လား။ ငါ့လက်လာစွဲတော့ ငါပါလဲမှာပေါ့ဟဲ့ အကောင်ရဲ့ ဟူ၍ ဖြစ်သတည်း။
ဒီအတွဲလေးကိုကြည့်ပြီး တစ်ချို့ . . . တစ်ချို့ တခြားအတွဲလေးများကို ပြောချင်တာကတော့ -
ပြောတိုင်း အဟုတ်မထင်နဲ့ ချစ်တယ်ဆိုတိုင်း မယုံရ
တကယ့် တကယ်တော့ အာပလာ သုည !!!
လူတိုင်း လူတိုင်း စစ်မှန်သော အချစ်နှင့် သစ္စာကို ကိုးကွယ်ခြင်း ဆည်းကပ်ခြင်း မပြုမီ သတိပြုဆင်ခြင် နိုင်ပါစေ သတည်း :P
Labels: ရသ at 5:38 AM
သေရာပါ ... ပါလာတရ် !
Labels: ကဗျာ at 1:53 PM
အဆုံးသတ် ရှိပါလေသလား ?
လိုရင်း `သစ္စာ´ ပါမလာဘူး
အခါ နှောင်းခဲ့သူ `ငါ !´
Labels: ကဗျာ at 1:00 PM
အို ... မုန်းစတမ်းဆို
မညာပါဘူး ... ညာချင်ယောင်ဆောင်နေတာ
မပျော်ပါဘူး ... ပျော်ချင်ယောင်ဆောင်နေတာ
မပြောလိုက်ချင်ဘူး ... !!!
Labels: ကဗျာ at 12:41 PM
ငါ ........... !
Labels: ကဗျာ at 12:20 PM
ဟိုး ..... အဝေးကြီးမှာ
ငါ ! ဆေးကုမလို့ .... ။
Labels: ကဗျာ at 11:33 AM
Thadar Htet Paing
*Time For You*
အရိပ်ပမာလိုက်နေတဲ့ မင်းရဲ့ အပြုံးတွေနောက်ကို မင်းပြုံးမပြခဲ့ပေမယ့် မင်း ကိုခင်မင်ခဲ့တဲ့ သံယောဇဉ်အတွက် သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်လို တွေ့ကြုံ...
* * * စိတ် * * *
ချစ်စိတ်နဲ့ မချစ်စိတ်တွေ ပိုင်းခြားစည်းတားရင်း ကိုယ့်အိပ်ယာကိုယ်ပြန်ကြည့်တော့ ခေါင်းအုံးထက်က အလွမ်းတစ်ချို့က ပေကျံစွန်းထင်းလို့ . . . သ...
ရာထူး တစ်ခု ပေးမလို့ ယူမလား မေးတော့ ပျက်ရယ်သဘော ဟာသ နှောတယ်။ တကယ်ပါ ကြံရွယ်မိတာဖြင့် ကြာလှပါ ဘိ။ လေနှင်ရာ လွင့်မျောဖို့ ရွက်တိုင်...
ဘယ်လိုစမှန်းမသိတဲ.ခင်မင်မူ အမှတ်မထင်ဝင်လာတဲ.မင်းအသံလေး....... သတိမထားမိခင်လေးမှာဘဲ... အစွဲအလမ်းကြီးမိတဲ.ငါ.... သဒ္ဒါပါတဲ.လေသူတို.တြွေေ...
ကိုယ့်ရှေ့မှာ ကြုံတွေ့လိုက်ရတဲ့ ချစ်သူ စုံတွဲအကြောင်းလေး ပြောပါရစေဦး။ မိုးတွင်းကာလက အဖြစ်အပျက် တစ်ခုပါ။ ကျွန်တော် အလုပ်ပြန်ချိန် မိုးကလဲ ...
မမေ့သေးဘူး ရင်မှာရူးလို့ စိတ်မှာ စူးတရ် ချစ်သူမင်းပြော ငါ့သဘောက ရင်မှာမောတရ် နင်လိုသလို သုံးဖို့ကိုသာ ကြံရွယ်ထားခဲ့ လိုရာ သွားပါ ငါ့ကို ထာ...
ကဗျာတပုဒ်...........လွမ်းတဆုပ်နဲ့....... နမ်းတပွင့်ဝေ....ပန်းလဲလွင့်ကြွေ.......... သမုဒယမိုး......လွမ်းနောင်တမျိုးနင့် ပန်းကြွေလေးတောင်......
ပြုံးပန်း တွေခြွေ သူငယ်ချင်းရေ ရင်ထဲတိတ်တိတ် ချစ်စိတ်လေးက တမ်းတမျှော်မှန်း ကြိတ်မှိတ်လွမ်းလို့ အရမ်းကြီးဘဲ သတိရတယ် . . . !!!* “ဆြို...
ဆိုကြပါစို........ နေ့ညများစွာက...သမတ်ရိုးကျလည်ပတ်... ချိန်နာရီများစွာကဖြင်....ရွှေ့လျားလှုပ်ရှာိးပိပိရိရိစည်းချက်ညီညီနဲ့...ဖြတ်သန်း....လု...
ချစ်သူမျက်နှာကောက်ကြောင်း ရေးရေးလေးကိုငေး ငါ့ ! စိတ်က တစ်စုံတစ်ခုလို့ သတ်မှတ်လို့တဲ့ တည်နေရာသို့ . . .။ ဘ၀တစ်ခုရဲ့ ဖြတ်မျဉ်းတွေလဲ မေ့ေ...
သူ့ကို ကျနော် ချစ်သည်
Copyright © My New World